UYehova​—UMlungiseleli NoMkhuseli Wethu | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseMexico Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
UYehova—UMlungiseleli NoMkhuseli Wethu
“Ngenxa yokuba ebonise umsa wakhe kum, nam ndiya kumsindisa. Ndiya kumkhusela ngenxa yokuba elazi igama lam.”—INDU. 91:14.
Kutheni sinokuthi uYehova unguMlungiseleli Obalaseleyo?
Yiyiphi indima eye yadlalwa nguYesu ekuxolelaniseni abantu noThixo?
UYehova ubakhusela njani abo bamthandayo nabamthobelayo?
1, 2. Ziziphi iimeko ezahlukeneyo esinazo entsatsheni nakwindlela esafunda ngayo inyaniso?
NGUYEHOVA owaqalisa ilungiselelo lentsapho. (Efe. 3:14, 15) Noko ke, nokuba sesizalwa ngumntu omnye, siba neempawu neemeko ezahlukeneyo. Kusenokwenzeka ukuba wena ubuhlala nabazali bakho ukususela ebuntwaneni bakho kude kube ngoku. Mhlawumbi abanye baye bafelwa ngabazali babo ngenxa yokugula, ingozi okanye enye intlekele. Kanti kukho nabanye abangabazi nokubazi abazali babo.
2 Njengentsapho yabakhonzi bakaYehova, sifumene inyaniso ngeendlela ezahlukahlukeneyo. Kusenokwenzeka ukuba ukhuliswe ngabazali abangamaKristu, yaye baye bakufundisa ukuphila ngemilinganiselo kaThixo. (Dut. 6:6, 7) Okanye ungomnye wabantu abafundiswa inyaniso ngamaNgqina kaYehova.—Roma 10:13-15; 1 Tim. 2:3, 4.
3. Ziintoni esifana ngazo sonke?
3 Phezu kwazo nje ezi meko sisandul’ ukuzikhankanya, zikho izinto esifana ngazo sonke. Sithwaxwa yimiphumo yokungathobeli kuka-Adam yaye asifezekanga, sinesono futhi siyafa. (Roma 5:12) Nakuba kunjalo, njengabanquli bokwenyaniso sinokubhekisela kuYehova ‘njengoBawo wethu.’ Ethetha ngabantu bamandulo ababekhethwe nguThixo, uIsaya 64:8 uthi: “Yehova, wena unguBawo.” Ngaphezu koko uYesu wawuqala ngolu hlobo umthandazo ongumzekelo: “Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho.”—Mat. 6:9.
4, 5. Ziziphi izinto esiza kuzihlolisisa eziya kusinceda simxabise nangakumbi uBawo wethu, uYehova?
4 UBawo wethu wasezulwini uyasinyamekela yaye uyasikhusela njengabantu ababiza egameni lakhe nabanokholo. Umdumisi umcaphula esithi: “Ngenxa yokuba [umnquli wokwenyaniso] ebonise umsa wakhe kum, nam ndiya kumsindisa. Ndiya kumkhusela ngenxa yokuba elazi igama lam.” (INdu. 91:14) Ekubeni singabantu bakhe yaye esithanda, uYehova uyasikhusela kwiintshaba zethu ukuze singacinywa.
5 Ukuze simxabise nangakumbi uBawo wethu wasezulwini, makhe sihlolisise ezi nkalo zintathu: (1) UBawo wethu unguMlungiseleli wethu. (2) UYehova unguMkhuseli wethu. (3) UThixo ungoyena Mhlobo wethu. Njengoko sifunda ngezi zinto kuya kusinceda ukucamngca ngolwalamano lwethu noThixo nokuqonda indlela esinokumhlonela ngayo njengoBawo wethu. Kuya kusinceda nokucinga ngeentsikelelo uYehova azinika abo basondela kuye.—Yak. 4:8.
UYEHOVA, UMLUNGISELELI OBALASELEYO
6. Yiyiphi indlela uYehova abonisa ngayo ukuba unguMniki waso “sonke isipho esilungileyo”?
6 Umfundi uYakobi wabhala wathi: “Sonke isipho esilungileyo naso sonke isipho esigqibeleleyo sivela phezulu, kuba sihla sivela kuYise wezikhanyiso zesibhakabhaka.” (Yak. 1:17) Ubomi bubodwa nje busisipho esimangalisayo esivela kuYehova. (INdu. 36:9) Xa siphilela ukwenza ukuthanda kukaThixo, sinandipha intabalala yeentsikelelo ngoku yaye sizibeka ethubeni lokufumana ubomi obungunaphakade kwihlabathi elitsha. (IMize. 10:22; 2 Pet. 3:13) Kodwa oko kunokwenzeka njani ekubeni sithwaxwa yimiphumo yokungathobeli kuka-Adam?
7. UThixo wasivulela njani ithuba lokuba sibe nobuhlobo obusondeleyo kunye naye?
7 Ngokwenene uYehova unguMlungiseleli Obalaseleyo ngeendlela ezininzi. Ngokomzekelo, ngenxa yobubele bakhe obungasifanelanga uyasisindisa. Sonke sinesono yaye sizuze ukungafezeki kukhokho wethu uAdam. (Roma 3:23) Sekunjalo, ngenxa yokusithanda kwakhe, uYehova wathabatha inyathelo lokuqala ukuze sikwazi ukuba nobuhlobo obusondeleyo kunye naye. Umpostile uYohane wabhala wathi: “Kwabonakaliswa ngale nto ukusithanda kukaThixo, ngokuthi uThixo athumele uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo ehlabathini ukuze sizuze ubomi ngaye. Ngoko ayisithi esamthandayo uThixo, koko nguye owasithandayo waza wathumela uNyana wakhe njengombingelelo wokucamagushela izono zethu.”—1 Yoh. 4:9, 10.
8, 9. UYehova waba nguMlungiseleli Obalaseleyo ngayiphi indlela ngexesha lika-Abraham noIsake? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
8 Into eyayenzeke kuAbraham kwiminyaka emalunga ne-1 900 ngaphambi kokuzalwa kukaYesu, yabonisa indlela uYehova awayeza kubavulela ngayo ithuba lokuphila ngonaphakade abantu abathobelayo. AmaHebhere 11:17-19 athi: “Ngokholo uAbraham, xa wavavanywayo, kwafana nokuba wayemnikele uIsake, yaye njengoko wayezamkele ngochulumanco izithembiso walinga ukunikela ngonyana wakhe okuphela kwamzeleyo, nangona kwakuthiwe kuye: ‘Oko kuya kubizwa ngokuba “yimbewu yakho” kuya kuba ngoIsake.’ Kodwa wakubalela ekuthini uThixo wayekwazi ukumvusa kwanakwabafileyo; yaye khona apho wamzuza ngokomzekeliso.” Kulula ukubona indlela efana ngayo into eyenziwa nguAbraham naleyo yenziwa nguYehova. Kaloku noYehova wanikela ngoNyana wakhe, uYesu Kristu, ngenxa yabantu bonke.—Funda uYohane 3:16, 36.
9 Unokuyithelekelela indlela ezehla ngayo izibilini kuIsake xa wasindiswa ekufeni! Ngokungathandabuzekiyo walixabisa ngokwenene ilungiselelo likaThixo lokuba esikhundleni sakhe kubingelelwe ngenkunzi yegusha eyayibambeke kwityholo elikufutshane. (Gen. 22:10-13) Kungenxa yeso sizathu le nto loo ndawo yabizwa ngokuba “yiYehova-yire,” igama lesiHebhere elithetha ukuba “UYehova Uya Kusilungiselela.”—Gen. 22:14.
10, 11. Ngoobani abaye bakhokela ‘kubulungiseleli boxolelaniso,’ yaye bakwenze njani oko?
10 Njengoko sicamngca ngendlela uYehova azingqine ngayo enguMlungiseleli Obalaseleyo, siyayiqonda indima ebalulekileyo eyadlalwa nguYesu Kristu njengoko noPawulos wathi: “Ngenxa yokuba siye sagqiba kwelokuba, umntu omnye wabafela bonke; ngoko ke, bonke bafile; yaye wafela bonke ukuze abo baphilayo bangabi saziphilela, kodwa baphilele yena lowo wabafelayo waza wavuswa.”—2 Kor. 5:14, 15.
11 Ngenxa yokuthanda kwawo uThixo nokuxabisa kwawo ilungelo lokuba ngabakhonzi bakhe, amaKristu amandulo abamkela ngovuyo “ubulungiseleli boxolelaniso.” Umsebenzi wawo wokushumayela nokwenza abafundi wavula ithuba lokuba abo banyanisekileyo babe seluxolweni kunye noThixo, babe nobuhlobo naye baze babe ngabantwana bakhe. Namhlanje, abakhonzi bakaYehova abathanjisiweyo basaqhubeka nalo msebenzi. Oko bakuphumezayo njengoonozakuzaku bakaThixo noKristu kwenza kube lula ukuba abantu abafanelekayo babe ngabakhonzi bakaYehova.—Funda eyesi-2 kwabaseKorinte 5:18-20; Yoh. 6:44; IZe. 13:48.
12, 13. Sinokubonisa njani ukuba siyayixabisa intabalala yamalungiselelo kaYehova?
12 Ngenxa yokuxabisa uYehova onguMlungiseleli Obalaseleyo, onke amaKristu anethemba lokuphila emhlabeni ancedisa abathanjiswa kumsebenzi wokushumayela ngoBukumkani. Kulo msebenzi sisebenzisa iBhayibhile, elinye lamalungiselelo amangalisayo kaThixo. (2 Tim. 3:16, 17) Xa silisebenzisa ngobuchule iLizwi likaThixo entsimini, sinika abanye ithuba lokufumana ubomi obungunaphakade. Ukuze siwuphumeze lo msebenzi, sixhomekeke kwelinye ilungiselelo likaYehova—umoya oyingcwele. (Zek. 4:6; Luka 11:13) Njengoko sisoloko sibona kwiNcwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova, imiphumo yalo msebenzi iyachukumisa. Kulilungelo ngokwenene ukuba nenxaxheba kulo msebenzi uzukisa uBawo noMlungiseleli wethu!
13 Ekubeni uThixo esenzele onke la malungiselelo, kuhle sizibuze: ‘Ngaba ndenza konke okusemandleni am ukuze ndibonise indlela endiwaxabisa ngayo la malungiselelo kaYehova? Ziziphi iindlela endinokuphucula ngazo ubuchule bam bokushumayela iindaba ezilungileyo?’ Ukubeka uBukumkani kwindawo yokuqala ebomini bethu kuya kubonisa indlela esiwaxabisa ngayo la malungiselelo amangalisayo kaThixo. Xa sisenjenjalo uYehova uya kuzinyamekela iintswelo zethu. (Mat. 6:25-33) Ngenxa yokusithanda kwakhe, sifuna ukwenza konke okusemandleni ethu ukuze uThixo akholiswe sithi size sivuyise intliziyo yakhe.—IMize. 27:11.
14. UYehova ebesiba nguMsindisi njani kubantu bakhe?
14 Umdumisi uDavide wathi: “Ndixhwalekile yaye ndilihlwempu. UYehova uyandigqala. Uluncedo lwam noMsindisi wam.” (INdu. 40:17) UYehova ebesoloko esiba nguMsindisi wabantu bakhe njengeqela, ingakumbi xa betshutshiswa okanye behlaselwa ngokuqatha ziintshaba zabo. Siyalubulela ngokwenene uncedo lukaThixo kumaxesha anjalo namalungiselelo okomeleza ukholo lwethu asoloko esenzela wona!
15. Zekelisa indlela ubawo onothando amkhusela ngayo umntwana wakhe.
15 Ubawo onothando akapheleli nje ekubalungiseleleni abantwana bakhe kodwa uyabakhusela. Ngokuzenzekelayo ebeya kuzama ukubasindisa xa besengozini. Omnye umzalwana ukhumbula into eyamehlelayo xa wayeseyinkwenkwana. Xa babevela entsimini noyise bahamba ngendlela enqumla emlanjeni. Ngaloo ntsasa kwakune imvula enkulu eyabangela ukuba umlambo ugcwale. Ekuphela kwendlela yokuwela lo mlambo yayikukuman’ etsibela kumatye amakhulu avelileyo. Njengoko yayihamba phambi koyise, le nkwenkwe yatyibilika yaza yatshona emanzini. Yavuya kakhulu xa uyise wayitsalayo, eyisindisa ekumkeni namanzi! UBawo wethu wasezulwini uyasihlangula koko kubonakala ngathi zizikhukula zeli hlabathi nakumlawuli walo, uSathana. UYehova ungoyena Mkhuseli sinokuthembela kuye.—Mat. 6:13; 1 Yoh. 5:19.
16, 17. UYehova wawakhusela njani amaSirayeli xa ayesilwa nama-Amaleki?
16 Indlela uYehova abakhusela ngayo abantu bakhe yabonakala kakuhle emva kokuba ehlangule amaSirayeli kubukhoboka baseYiputa waza ngokungummangaliso wawaweza kuLwandle Olubomvu ngo-1513 B.C.E. Emva kokunqumla kuloo ntlango lusingise kwiNtaba yeSinayi olu hlanga lwafikela eRefidim.
17 Ngenxa yesiprofeto esikwiGenesis 3:15, uSathana umel’ ukuba wayebila esoma ekhangela indlela yokuhlasela olo hlanga lwalubonakala lungenamkhuseli. Wasebenzisa ama-Amaleki awayeziintshaba zabantu bakaThixo. (Num. 24:20) Cinga ngoko kwaphunyezwa nguYehova esebenzisa amadoda athembekileyo amane—uYoshuwa, uMoses, uAron noHure. Njengoko uYoshuwa wayesilwa nama-Amaleki, uMoses, uAron noHure babekwinduli ekufuphi. AmaSirayeli ayesoyisa xa uMoses ephakamise izandla zakhe. Zazisithi izandla zakhe zisakudinwa, uAron noHure bazixhase. Encedwa yaye ekhuselwa nguYehova, “uYoshuwa wamoyisa uAmaleki nabantu bakhe.” (Eks. 17:8-13) UMoses wakha isibingelelo kuloo ndawo, wasibiza ngokuthi “nguYehova-nisi,” gama elo elithetha “UYehova Uyindawo Yam Yokusabela.”—Funda iEksodus 17:14, 15.
UKUKHUSELWA KUMAKHAMANDELA KASATHANA
18, 19. UThixo uye wabakhusela njani abakhonzi bakhe kweli xesha lethu?
18 UYehova uyabakhusela abo bamthandayo nabamthobelayo. NjengamaSirayeli eseRefidim, sibalekela kuThixo xa sihlaselwa ziintshaba zethu. UYehova ebesoloko esikhusela njengeqela, yaye esikhusela kumakhamandela kaMtyholi. Cinga ngezihlandlo ezininzi apho uThixo aye wakhusela amaKristu athembekileyo. Ngokomzekelo, wawakhusela xa kwakulawula amaNazi eJamani nakwamanye amazwe ngeminyaka yee-1930 nasekuqaleni kweyee-1940. Ukufunda nokucinga ngamabali obomi nangeengxelo ezikwiNcwadi Yonyaka ezithetha ngendlela uThixo abakhusela ngayo abantu bakhe ngexesha lentshutshiso kuya kusenza simthembe nangakumbi uYehova njengendawo yethu yokusabela.—INdu. 91:2.
UYehova unokusebenzisa abo sikhonza nabo ukuze basincede sihlale sithembekile ngamaxesha obunzima (Funda isiqendu 18-20)
19 Intlangano kaYehova isinika izikhumbuzo zothando ezisikhuselayo, maxa wambi isebenzisa iincwadi zayo. Cinga ngendlela okuye kwaba luncedo ngayo oku kutshanje. Ihlabathi lithe phithi kukuziphatha kakubi ngokwesini, ukunxila, nokubukela iphonografi. Kodwa uYehova usoloko esinika izikhumbuzo ezisinceda siziphaphele iingozi zokuziphatha okubi. Ngokomzekelo, uBawo wethu uyasiluleka ukuze siphephe ukunxulumana nabantu abangalunganga kwiiwebhsayithi zokuncokola. *—1 Kor. 15:33.
20. Ibandla lamaKristu lisikhokela lize lisikhusele ngaziphi iindlela?
20 Yiyiphi indlela esingabonisa ngayo ukuba ngokwenene ‘sifundiswa nguYehova’? Kukuthobela imiyalelo yakhe. (Isa. 54:13) Amabandla esikuwo ayindawo ekhuselekileyo kuba kukho amadoda athembekileyo angabadala, asebenzisa iZibhalo ukuze asikhokele aze asinyamekele. (Gal. 6:1) UYehova usebenzisa ezi ‘zipho zingabantu’ ukuze asikhusele. (Efe. 4:7, 8) Sifanele sisabele njani xa esiluleka? Xa sizithoba ngokuzithandela uThixo uya kusisikelela.—Heb. 13:17.
21. (a) Yintoni esifanele sizimisele ukuyenza? (b) Nguwuphi umbuzo oza kuphendulwa kwinqaku elilandelayo?
21 Ngamana singazimisela ukufuna ukhokelo lomoya oyingcwele nokuthobela ukhokelo esilufumana kuBawo wethu osezulwini. Sifanele sicamngce nangendlela awayephila ngayo uNyana wakhe, uYesu Kristu, size sixelise umzekelo wakhe obalaseleyo. Ngenxa yokuba wathobela kwada kwasa ekufeni, uYesu wafumana umvuzo omkhulu. (Fil. 2:5-11) Nathi siya kusikelelwa xa sithembela kuYehova ngayo yonke intliziyo yethu. (IMize. 3:5, 6) Kwanga singasoloko sithembele kuYehova njengoMlungiseleli noMkhuseli ongenakuthelekiswa namntu. Kulilungelo elivuyisa ngokwenene ukuba ngabakhonzi bakhe! Noko ke, uYehova ungoyena mhlobo wethu ngayiphi indlela? Njengoko siphendula lo mbuzo kwinqaku elilandelayo siya kutsho simthande nangakumbi.
^ isiqe. 19 Eminye imizekelo inokufumaneka kwinqaku elithi “Ukusisebenzisa Kakuhle Isixhobo Esidibanisa Ihlabathi I-Internet” kwiMboniselo ka-Agasti 15, 2011, iphepha 3-5 nakwelithi “Yilumkele Imigibe KaMtyholi!” kunye nelithi “Yimani Niqinile Nize Niyiphephe Imigibe KaSathana!” kwiMboniselo ka-Agasti 15, 2012, iphepha 20-29.